Halkalı Kapikule High Speed ​​Train Project Tender 2015 N'ikpeazụ | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara22 EdirneHalkalı Usoro Kapikule High Speed ​​Train Project 2015 Obi Ụtọ
23 / 01 / 2015 22 Edirne, 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, oru, Isi akụkọ, Turkey, TCDD
Akwụsịghị na Halkali Kapikule ụgbọ ala na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Halkalı-Kapıkul Fast Train Project obi 2015 ọgwụgwụ: The European Union Mbon ka Turkey Financial Cooperation na Infrastructure-Social-Regional Projects Isi nke Unit Secretary François BEGEOT na Sector Manager Göktuğ ala, TCDD General Director Süleyman gara karaman'da.
N'ihe gbasara Rehabilitation and Reconstruction of Köseköy-Gebze Line (KGR) na Ndaghachi na Ịgba Nkwepụta nke Irmak - Karabük - Zonguldak Line (IKZ) Projects, e mere nyocha n'etiti kọmitii ndị ọbịa na ndị isi nlekọta nke TCDD.
TCDD oru ngo nke ngosi Center-Gebze ghara ịgbanwe na nwughari nke akara (KG) na Irmak-Karabük-Zonguldak Line nke ghara ịgbanwe na egosi (ICT) Turkey si akporo ọrụ; Ná nzukọ ahụ, e mesiri ya ike na EU natara òkè dị ukwuu nke IPA Grant Fund; Ekwuru na ọrụ ndị a bụ nnukwu ọrụ nke IPA kwadoro na 146,8 M € na ọnụahịa 219,9 M dịka ọnụahịa na 85% nke ụgwọ ụgwọ ha bụ EU Grant.
3 sitere na Nchedo François BEGEOT. Ozi ọma maka EU Project
N'oge nzuko ahụ, ọnọdụ ọhụrụ kachasị na usoro Samsun-Kalın Line (SaKa), ọrụ nke atọ nke IPA kwadoro, bụ nke ndị ọzọ kwadoro. Onye nlekọta nzuzo François BEGEOT kelere TCDD maka onyinye nke TCDD n'oge nkwadebe na usoro dị nro nke oru ahụ. 20 E kwuru na a ga-ewere okwu ndị dị nro na January 2015.
N'ime usoro mmelite nke Samsun-Thick Line (Saka) Project, a ga-ewughachi usoro ahụ dị iche iche na ngwa (n'iji 60E1 rail na B70 ụdị ihi ụra). ERTMS ETCS A ga-arụkwa Nlekọta 30 Signaling System n'ogo dum, nke ga-ewe ọnwa iji wuo 1.
Halkalı Usoro Kapikule High Speed ​​Train Project dị nro na njedebe nke 2015
N'aka nke ọzọ, n'ihi n'eziokwu na ọ na-ejikọ mba anyị na Europe, a nabatara ya dị ka otu n'ime ọrụ kachasị mkpa ma ọ bụ zubere inye ego site na IPA Grant. Halkalı- A gbanwere ndị nnọchianya maka Project Kapirukle High Speed ​​Train. Enwere ike imuta omumu ọmụmụ ihe HalkalıA ga-ekwuputa obiọma maka Ọkụ ụgbọ elu Kapıkule High Speed ​​na njedebe nke 2015.
TCDD General Manager Süleyman Karaman gwara ndị nnọchianya ndị ọbịa gbasara nnyefe nke Ụgbọ okporo ígwè nke European Union nyere nkwado enyemaka ego ma kwue na ọrụ na-aga n'ihu, ọrụ mmepe ọhụrụ, mmezigharị na ntọhapụ nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-aga n'ihu.
Onye isi gọọmenti KARANAN kelere Undersecretary François BEGEOT maka onyinye ego nyere dịka onyinye maka nleta ha.
Ndị nnọchiteanya nke onye isi oche TCDD bụ Süleyman KARAMAN bụ ndị TCDD Deputy General Manager İsa APAYDIN, ndị isi oche Muck, na ndị isi mba na-azụ Isi İbrahim H. ÇEVİK.
Halkalı Kapikule Railway Construction Akwụsịghị Emecha
European Union Mbon na Turkey
ịtọhapụ ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Onye isi oche nke TCDD Süleyman Karaman
Ntụle na-atụ egwu: A ga-enweta ọrụ nkwụ ụgwọ
Panel na Ọkwa Crossings na Izmir